उडुसले सताएर हैरान हुनु भएको छ ? हेर्नुहोस उडुस भगाउने घरेलु उपायहरु यस्ता छन ! जानी राखौ « Onlinetvnepal.com
उडुसले सताएर हैरान हुनु भएको छ ? हेर्नुहोस उडुस भगाउने घरेलु उपायहरु यस्ता छन ! जानी राखौ
Published :4November, 2018 8:58 am
विषालु कीराको बारेमा सोच्दा मात्र पनि कतिपयलाई राति निद्रा नै पर्दैन। उडुसको टोकाइबाट शरीर चिलाउने, सुन्निने तथा एलर्जी हुने गर्छ। उडुस सानो र छिट्टै लुक्ने परजीवी भएकाले यसलाई खोजेर निर्मूल पार्न एकदमै कठिन हुन्छ। एउटा माउ उडुसले आफ्नो जीवन कालभर ५ सय अण्डा पार्छ। ती अण्डाबाट निस्कने बच्चाले पछि फेरि अण्डा निष्कासन गर्छ।
यसरी प्रत्येक पिढीमा तिनको सङ्ख्या बढ्दै जान्छ र यिनीहरू झुण्ड हुँदै पूरै घरभरि फैलन्छन् । त्यसैले, तिनको रोकथाममा जति ढिलाइ गर्‍यो, त्यति नै प्रकोप बढ्छ र नियन्त्रण गर्न पनि कठिन हुन्छ। उडुसलाई निर्मुल पार्न यसकारणले पनि कठिन छ कि, यिनीहरू नखाएर पनि लामो समयसम्म बाँच्न सक्छन्।
उडुस नियन्त्रणमा सघाउने केही घरेलु विधिहरु : जानी राखौ :
टी ट्री स्प्रे : टी ट्रीको तेल एण्टी माइक्रोबियलको रूपमा परिचित छ। उडुसबाट छुटकारा पाउन पनि यो उत्तिकै उपयोगी छ। यसको प्रयोगका लागि टी ट्रीको तेलको एउटा ठूलो सिसी खरीद गर्नुहोस्। यसमा अलिकति पानी मिसाएर केही पातलो बनाउनुहोस्।
अब यसलाई स्प्रे बोतलमा भरेर भित्ता, पलङ, दराज, फर्निचर, डसना, कपडालगायत सामग्रीमा छर्कनुहोस्। यसलाई एक हप्ता लगातार छर्कनाले तपाईं सधैंभरका लागि उडुसबाट छुटकारा पाउन सक्नुहुनेछ।
नीमको तेल : नीमको तेल उत्तर भारतमा पाइने नीमबाट निकालिन्छ। यसमा धेरै एण्टी माइक्रोबियल गुण हुन्छन्। कीराहरू टाढा राख्न यसको प्रयोग गरिन्छ। नीमको तेल औषधि पसलमा पाइन्छ ।
यसको प्रयोग उडुस भएको ठाउँ तथा घरको सबै भागमा छर्केर गर्न सकिन्छ। साथै, साबुनमा यसलाई मिसाएर कपडा धुने गर्नाले यसको गन्धले उडुस टाढा भाग्छ।
स्वीट फ्लेग : स्वीट फ्लेगलाई कलामस पनि भनिन्छ। यसको प्रयोग रसायनमा आधारित कीटनाशक बनाउन गरिन्छ। यसमा एण्टी माइक्रोबियल गुण हुन्छ, जसको कारणले उडुसजस्ता परजीवी भगाउँछ। यसबाट बनेको हर्बल कीटनाशक तपाईं किचेन गार्डेनसम्बन्धी पसलमा पाउन सक्नुहुन्छ।
स्वीट फ्लेगको पाउडर ल्याएर त्यसको प्याकेटमा लेखिएको निर्देशनअनुसार त्यसको घोल बनाउनुहोस्। त्यस घोललाई आफ्नो घरको कुनाकुना (उडुस भएको ठाउँ)मा छर्कनुहोस्। उडुस भगाउन यो विधि पनि निकै प्रभावकारी मानिएको छ।
मृगौला खराब भएर बर्षेनी सैयौंले ज्यान गुमाउँछन् । मृगौला शरीरको यस्तो अंग हो, जसको अनुपस्थितीमा